Iiapps zentsimi-AppStudio yeArcGIS-Geofumadas
Epreli, 2019 ArcGIS-ESRI, ezintsha
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo sithathe inxaxheba saza sasasaza i-webinar egxile kwizixhobo ezibonelelwa yi-ArcGIS yokwakha izicelo. UAna Vidal noFranco Viola bathathe inxaxheba kwi-webinar, abaqale bagxininisa i-AppStudio ye-ArcGIS, bechaza kancinci indlela iArcGIS interface enxibelelene ngayo nazo zonke izinto zayo, usetyenziso lwe desktop kunye nokusetyenziswa kwewebhu.
I-ajenda ye-webinar ichazwe ngamanqaku amane asisiseko: njengokukhethwa kweetemplates, ukucwangciswa kwesitayela, nokulayishwa kwezicelo zewebhu kwiipulatifomu okanye bangaliboni apho abasebenzisi banokuzikhuphelela khona usetyenziso kwaye bazisebenzise kwiindawo zobuqu okanye zomsebenzi. Ukusebenziseka kwezicelo ezenziweyo kuxhomekeke kwinto eziyilelwe yona, ke iArcGIS ihlela usetyenziso lwayo lube:
Ofisi - desktop: (ezinxulumene nazo zonke iinkqubo ezihlobene ne-ArcGIS kwimo yendalo, njenge-Microsoft Office)
Ummandla: ngaba izicelo ezibonelela ngeendawo zokuqokelela idatha kwintsimi, njengaye Umqokeleli we-ArcGIS okanye i-Navigator
Yoluntu: zezicelo apho abasebenzisi banokubanxibelelana nokuvakalisa naluphi na uluvo lwabo malunga nokusingqongileyo, ukusebenzisana ekuqokelelwa kolwazi kwi-GIS, ngoku kuthiwa
Abadali: yenzelwe ukudala izicelo zewebhu okanye nayiphi na ifowuni yeselula (ephendulayo), ngokusebenzisa iimodeli ezilungiselelweyo, i-Web Appbuilder ye-ArcGIS, okanye i-protagonist ye-webinar AppStudio ye-ArcGIS.
I-AppStudio ye-Arcgis, ngumsebenzi owenzayo "Izicelo zamanqanaba amaninzi", Oko kukuthi, zinokusetyenziswa kwii-PC, iipilisi okanye ii-smartphones. Ichazwa ziifomathi ezimbini zokusetyenziswa, isiseko esinye, esifikeleleka kwiwebhu. Kwaye esona sicelo siphambili sikhutshelwe ukuba sisetyenziswe kwi-PC. NgeAppStudio, unako ukwenza usetyenziso ukusuka ekuqaleni, okanye uthathe iitemplate ngaphambili kwisicelo okanye ngaphambili esenziwe ngabanye abasebenzisi. UVidal ubonise izicelo ezininzi ezenziwe kwi-AppStudio, ngeenjongo ezahlukeneyo, ukusuka kukhenketho, i-gastronomy, i-ecology, kunye nokuhanjiswa kwabantu.
Kuyathakazelisa umbandela wemingeni kunye neengcinga ezithathayo xa usenza isigqibo sokwenza isicelo kwaye yiyiphi enye into ephawulekayo phakathi kokuphuhliswa kunye neeprogram zokubhala kunye nokuyidala kwi-AppStudio.
"Umngeni we-AppStudio kwakufuneka ube nesipilisi esilula ukuyisebenzisa, ufikeleleke ngoqoqosho kuluntu, oluququzelela ukuphuhliswa kwezicelo zomthonyama kwaye ezinokusasazwa kuzo zonke iiplatifomu"
Ukuba kukho inyathelo lokuqala ukwenza isicelo kunye neekhowudi ezithile zenkqubo, kufuneka kuthathelwe ingqalelo ukuba: kubiza imali ngandlela zonke (kubalulekile ukuba nobutyebi obukhulu bezoqoqosho, obabantu kunye nexesha), chaza nokuba isicelo siza kusasazwa njani isicelo, chaza iiparameter zokhuseleko; ezinje ngokwenza usetyenziso lube sesidlangalaleni okanye ngasese kubasebenzisi abathile. Kukwabalulekile ukuqaphela ulondolozo kunye nohlaziyo, ezihlala zintsokothe ​​kakhulu kuba kubandakanya ixesha elininzi.
Kuyaqondakala ukuba iAppStudio, yenza lula iindleko, kokubini ngexesha nakwintsimi yezemali, kulula kakhulu ukuyisebenzisa (ngakumbi, kwabo bantu bangadibaniyo neenkqubo zenkqubo kwaye abangazange banxibelelane nawo nawuphi na umxholo olu hlobo); awudingi ukuba ube ngumqambi onamava. I-AppStudio isekwe kwiArcGIS Runtime, equka iilayibrari ezininzi ezivumela uhlalutyo kunye nokubonwa kwemephu, kwaye ikwabandakanya usetyenziso lweselfowuni, onokuthi ulingise ukuba umbono wakho wokugqibela uza kuba njani ngaphambi kokuwuthumela kwiivenkile ezifanelekileyo. Isebenza kumaqonga amaninzi, yenye enye ngokudibanisa, kuba kunokuthiwa akukho zithintelo ekusebenziseni inkqubo yokusebenza.
Ukuze isicelo lweenkobe ixhaswa kwiinkqubo 5 (iOS, Android, Windows, Linux and Mac), kufuneka uzakujikelezisa amaxesha 5 zokuhlela ikhowudi (5X), nantsi enye ubunzima abasebenzisi zesiqhelo, kodwa uke kusonjululwe ApStudio (1X - ikhowudi kumaqonga ezininzi zisebenzisa). Oku ngobugcisa Qt - sikhokelo.
Ukongezelela izimvo ngokuphindaphindiweyo kwi ningenakumbi ukusetyenziswa AppStudio, ezibaluleke kakhulu ukubona izicelo ezininzi yadalwa ngale eqongeni, ezifana: TerraThruth, Turt okanye Ikholoji Marine Unit Explorer, nto leyo ngumzekelo yokunciphisa inkunkuma xesha kanti nguye phuhliswa kwiiveki ze-3 kuphela.
Ngomzekelo osebenzayo, i-webinar yabona amanyathelo okuqala ukudala isicelo esilula kwaye uyithumele kwiivenkile ezizodwa zokusebenza, ugxininisa ukuba akufanele ube nolwazi olwaneleyo kwiprogram ye-GIS, xa sibona isikhombiso sesikhulumi se-AppStudio kwideskithophu.
Ukusebenza kwayo kukhululekile, kulula ukuyifumana; kuhlaziyo ngalunye ngaphezulu kongezwa, itemplates zibanjwa eqongeni kwaye zixhomekeke kumxholo oza kuboniswa. Umzekelo, ulwazi lwenkampani ebizwa ngokuba yiGalari lwalusetyenziswa, olwalufuna ukuba kwenziwe isicelo ukubonisa indawo yeziganeko ezinxulumene nezobugcisa phakathi kwePalermo - Recoleta kunye neSekethe yoBugcisa.
Itemplate yoKhenketho lweMephu yakhethwa kule nkampani kuba yenzelwe ukubhengeza iinkcazo zesifundo esithile; Enye yezinto ezizodwa zayo kukuba inokudityaniswa nayo nayiphi na iMephu yeBali eyayenziwe ngaphambili. Iimpawu zokuqala zibekwe zezi: isihloko, umxholo ongezantsi, inkcazo, iithegi, kunye nembono yokuqala ifunyenwe.
Ukucwangciswa kwesicelo kuyaqhubeka emva kokukhetha itemplate, kunye neepropathi zayo, umfanekiso ongasemva, ifonti kunye nobungakanani benkcazo. Ukhenketho lweMephu oluhambelana netemplate luyile, oluya kuthi lubotshelelwe kwisicelo kusetyenziswa i-ID.
Emva koko, uphawu oluza kuba nalo kwisitoreji sohlelo lokusebenza lukhethwa, kunye nomfanekiso oza kubonwa ngexesha lokulayishwa kwesicelo. Ukongeza i sampulu okanye iisampuli, mhlawumbi, kwaye ungadibanisa kaninzi njengoko kufuneka, ziquka, umzekelo: uqhagamshelwano ukuya camera isixhobo, indawo-time real, ikhowudi ye-bha umfundi okanye uqinisekiso ngokusebenzisa ufundo fingerprint.
Kucacisiwe, ngamaqonga okufunda, ukuba yiPC, iThebhulethi okanye iSmartphone, ukuba ufuna la maqonga mathathu onokukhetha kuwo, kwaye ekugqibeleni, layisha kwiArcGIS online nakwiivenkile ezahlukeneyo zesicelo sewebhu.
Iminikelo yokwenza ubuchwephesha
I-AppStudio yeArcGIS imele ubuchwephesha obukhulu, kungekuphela kokuwenza lula umsebenzi wenkqubo, kodwa kube lula ukusetyenziswa, isantya isicelo esinokwenziwa ngaso ngenjongo ethile kwaye senziwe sibonakale kuzo zonke iivenkile zesicelo . Ngokunjalo, elinye lawona manqaku anomdla kukuba ivumela ukuvavanywa- kuvavanywa ukuba amava omsebenzisi aya kuba njani.
Kunokuthiwa usetyenziso olwenziweyo olusebenzayo lujolise kuphuhliso lomhlaba, linegalelo elikhulu kubuchwephesha bendawo, kuba ezi zicelo ziya kuvumela unxibelelwano olungcono phakathi komhlalutyi kunye nomsebenzisi ngokubhekisele kwindalo esingqongileyo. Isicelo ngasinye sinethuba lokuthumela idatha kwilifu le-GIS kwaye emva koko yenze izigqibo, esikhokelela ekubeni sithi ziya kuba ngamanqaku aphambili kuphuhliso lweendawo ezixhumeneyo, apho izixhobo zetekhnoloji kunye nezixhobo zidityaniswa kunye amava omsebenzisi.
I-AppStudio enye yezahluko zeKhuseli ePhambili ye-ArcGIS Pro
Post edlulileyo«Ngaphambilini Yiya eVenezuela ngexesha lokutya
Post Next Yintoni ukuzibophezela kwamakhasino ukuba abe ngamaqumrhu azinzileyoOkulandelayo »